Akhriso Oo Ha Yaabin: Xaqiiqooyin Muujinaya in Ferland Mendy Uu Ka Wanaagsan Yahay Marcelo Iyo Midka Uu Sergio Ramos Ku Raaxaysto La Ciyaaristiisa - Gool24.Net
Akhriso Oo Ha Yaabin: Xaqiiqooyin Muujinaya in Ferland Mendy Uu Ka Wanaagsan Yahay Marcelo Iyo Midka Uu Sergio Ramos Ku Raaxaysto La Ciyaaristiisa
January 16, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Difaaca bidix ee Real Madrid ee Marcelo ayaa dib uga soo laabtay dhaawac laakiin ma haysto damaanad uu ku xajisto booskiisii uu kalida ku ahaa sannadaha badan, sababtuna waa in kooxdu ay degganaan iyo xasillooni badan dareento marka uu ciyaarayo Ferland Mendy.
Wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa soo ururiyey xog isbarbar-dhigaysa sida ay tahay bandhig ciyaareedka iyo natiijooyinka Real Madrid marka ay labadan difaac ciyaarayaan, waxaana gacanta sare ay Los Blancos yeelataa marka uu daafaca reer France ee Mendy ku jiro garoonka.
Sida uu wargeysku sheegay, Kabtanka Real Madrid, Sergio Ramos waxa uu dareemaa degganaaan iyo nasasho badan marka uu garabkiisa bidix taagan yahay Ferland Mendy waxaanu kaliya ku koobnaadaa inuu booskiisa ilaaliyo, laakiin marka uu Marcelo ciyaarayo, waxa fuusha masuuliyad kale oo ah inuu garabka bidix la qabto Marcelo oo inta badan weerarka iska aada, ayna suurtogal tahay in si fudud loo dhaafo.
Halka uu Marcelo ku fiican yahay weerarka, Mendy waxa uu ku wanaagsan yahay difaacista, waxaana taas caddayn u ah 15 kulan oo uu daafaca reer France ee Ferland Mendy kusoo bilowday waxa Real Madrid laga dhaliyey toddoba gool oo kaliya, halka dhamaan kulamadii uu Marcelo ciyaaray kaliya laba ciyaarood ay garoonka ka baxeen shabaqooda oo nadiif ah.
Toddobada gool ee Real Madrid laga dhaliyey kulamada uu ciyaarayey Mendy, kaliya hal gool oo ahaa midkii Angel di Maria uu ka dhaliyey ciyaartii PSG ay 3-0 ku garaacday ayaa ahaa qalad toos ah oo uu Mendy galay.
Dhinaca weerarka, waxa jira farqi weyn oo u dhexeeya labadan ciyaartoy. 1,223 daqiiqadood oo uu Mendy ciyaaray, kaliya hal mar ayuu toogtay goolka kooxda kasoo horjeedda oo uu kubaddana si fiican ugu aaddiyey, waxaanay ahayd ciyaartii Real Sociedad, taas beddelkeeda Marcelo oo ciyaaray 826 daqiiqadood waxa uu goolka si toos ah u toogtay toddoba jeer, taas oo ay u dheer tahay inuu caawiye ka noqday afar gool oo asxaabtiisu dhaliyeen.
Si kastaba, Zinedine Zidane waxa uu xili ciyaareedkan dhisay koox difaac ahaan aad u wanaagsan, waxaanay liiska kooxaha goolasha ugu yar qaaradda Yurub kaga jirtaa kaalinta saddexaad, waxaana ka horreeya PSG oo laga dhaliyey 15 gool 26 ciyaarood oo ay dheeshay, Atletico Madrid oo 19 shabaqeeda la taabsiiyey 27 kulan oo ay ciyaartay iyo Real Madrid oo kaalinta saddexaad soo fadhiisatay oo 21 gool laga dhaliyey 27 kulan oo ay ciyaartay dhamaan tartamada.